Dadka reer Albania ayaa rabshado ka dhigay wadada ugu horeysay ee lacag laga qaado dalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Gaadiidka » Dadka reer Albania ayaa rabshado ka dhigay wadada ugu horeysay ee lacag laga qaado dalka
Wararka Albania • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa isku dhacay booliska intii lagu guda jiray mudaaharaadyada looga soo horjeeday waddada ugu horreysa ee lacag laga qaado Albania oo u dhow tunnelka Kalimash ee waqooyiga waddanka, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Albania Fatmir Xhafaj ayaa sidaas yidhi.
Rabshadaha ayaa tuurayay dhagxaan, waxay ku burburiyeen sanaadiiqda wax lagu soo uruuriyo baararka, dabna way ku shiteen.
13 sarkaal ayaa ku dhaawacmay rabshadaha, ayuu yiri Xhafaj, iyadoo warbaahinta maxalliga ah ay sidoo kale soo warineyso dhaawacyada soo gaaray dibadbaxayaasha.
Wadada muranka badan ka taagan yahay ee 110km ayaa isku xirta bar kontorool oo ku taal soohdinta Kosovo iyo Milot, oo ah meel loo dalxiis tago oo ku taal Badda Adriatic, taas oo caan ku ah dalxiisayaasha Kosovan.
Dallad caalami ah, oo ka shaqeyn doonta wadada weyn 30ka sano ee soo socota, ayaa dejisay lacagaha laga qaado oo u dhexeeya 2.50 3.08 ($ 22.50) ilaa € 27.73 ($ XNUMX), iyadoo ku xiran nooca gaariga.
Daraasad la yaab leh CDC oo hadda la sii daayay oo ku saabsan waxtarka...